Qajeelfamni hanqinoota qorannoo fi qo’annoo sirreessu hojiirra oolaa jira – Fana Broadcasting Corporate
Qajeelfamni hanqinoota qorannoo fi qo’annoo sirreessu hojiirra oolaa jira
Finfinnee, Caamsaa 1,2011(FBC)-Hanqinoota dirree qorannoo fi qo’annoo irratti mul’atan sirreessuu kan dandeesisu qajeelfamni qophaa’ee gara hojiitti galamuu Ministeerri Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa Olaanaa beeksiseera.
Ministir deettaan Ministeerichaa Proofeessar Afawarqi Kaasuu turtii FBC faana taasisaniin, qajeelfamichi dhaabbileen barnootaa olaanoo naannawa isaanii bu’uura godhachuun wantoota dursi kennamuufii qabu irratti xiyyeeffannoo akka irratti godhan kan dandeesisuu jedhaniiru.
Biyyattii keessatti qorannoo fi qo’annoon bu’aa qabeessi hojjetaman sababoota adda addaan hojiirra akka hin oolle ragaaleen ni mul’isu.
Kanaafis wantoonni akka rakkootti ka’an xiyyeeffannoon dirrichaaf kenname gadi bu’aa ta’uu fi kaka’umsa qorattootati.
Qajeelfamni amma gara hojiitti seene kun hanqina baajataa gama qorannoo fi qo’annoon mudatuu fi rakkoolee walqabataa hiikuun filannoo kan mul’isu ta’uu Proofeessar Afawarqi dubbataniiru.
Qorannoo fi qo’annoo bu’aa qabeessa haala barbaadamuun gaggeessuuf deeggarsa kan kennu kaawunsiliin gorsaa Ministeerichaan akka dhaabbate ibsameera.
Kaawunsilichi dirricha gama deeggaruun shoora olaanaa qabaata jedhameet eegama.
Awwaal Abarraatu gabaase
Googiliin teeknooloojii afaan mallattoo gara sagalee dubbiitti jijjiiru uume
Twiitariin marsariitiiwwan hawaasummaa dhimma Hoong Koong odeeffannoo tamsaasaan haqe
Huwwaawween Afrikaatti himata hojii basaasaa hojjeta jedhame kufaa taasise
Hojjattoonni Feesbuukii haasaawwan sagalee Messengeriin ergaman dhaggeefatan